Iindaba - Wazi ntoni malunga nokupakishwa kwebhokisi yesipho esiphakamileyo?
Malunga nenkcazo yebhokisi yesipho esiphakamileyo, nokuba uphando lukaGoogle, alunazo neenkcazo ezichanekileyo, kwaye inkcazo yomntu ngamnye yahlukile, eli nqaku lixoxe ngebhokisi yesipho esiphakamileyo, ngakumbi ibhokisi yokuncamathisela, efuna inkqubo eninzi , kwaye kufuneka ibhokisi yokuncamathisela ebanzi, umxholo wesalathiso sabahlobo:
Ibhokisi yezipho ngumsebenzi wolwandiso lweemfuno zentlalo zokupakisha, ayisiyiyo kuphela indima yokupakisha kwaye iqaqambisa indima yendima ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, inqanaba elifanelekileyo lebhokisi yesipho likulungelelwaniso ngqo lokunyusa ixabiso iimpahla, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, buthathaka ixabiso lokusetyenziswa kwempahla. Ukwenzela ukuqaqambisa ixabiso lemveliso, kuya kusetyenziswa ulwelwesi olubiza kakhulu kwaye intle ukukhusela imveliso. Akukho nto iphakhejiweyo kwikhonkco lokuhambisa elilula kangako, ixabiso lesipho liphezulu kakhulu, ixabiso ekuhanjisweni kwalo liphezulu kakhulu, njengokukhululeka kungqubana, kukhululekile ekuguqukeni njalo njalo. Akukho mathandabuzo ukuba inefuthe eliphezulu kakhulu ekuhombiseni iimpahla ukutsala abathengi.
1. Ukuhlelwa kweebhokisi zezipho ezikumgangatho ophezulu
Ukusuka kwisahlulo selaphu lokuncamathisela, ezona zibalulekileyo zezi: iphepha, ulusu, ilaphu, njl.
Udidi lwephepha: kubandakanya iphepha lekhadibhodi legolide nesilivere, iphepha leeperile kunye nazo zonke iintlobo zephepha lobugcisa;
Isikhumba: kubandakanya ithwathwa kunye nelaphu elichasene nesikhumba, njl.
Indwangu: kubandakanya zonke iintlobo zekotoni kunye nelinen.
Ukusuka kubungakanani besicelo, ezona ndidi ziphambili yimichiza yemihla ngemihla, iwayini, ukutya, icuba, i-elektroniki yedijithali, ubucwebe njalo njalo.
Udidi lweekhemikhali lwemihla ngemihla: ikakhulu esetyenziswa kwizithambiso, iziqholo kwezi mimandla mibini;
Utywala: ikakhulu iwayini emhlophe, iwayini ebomvu nazo zonke iintlobo zewayini yangaphandle;
Udidi lokutya: ikakhulu itshokholethi kunye nokutya okusempilweni;
Udidi lwecuba: iimveliso eziphezulu ze-boutique ezisungulwe ziinkampani ezinkulu zecuba;
Izinto ze-elektroniki zedijithali: ezinjengebhokisi yefowuni enomnxeba ophezulu, ibhokisi yekhompyuter, njl.
Ubucwebe: Ubucwebe bazo zonke iintlobo sisimbo esikhethekileyo sokupakisha ibhokisi yesipho ukubonakalisa ubuntu babo.
Inkqubo yokuvelisa iibhokisi zezipho ezikumgangatho ophezulu
Inkqubo yemveliso yebhokisi yesipho inzima kakhulu kunokusonga ibhokisi yephepha. Ukulungiswa kwebhokisi yokusonga iphepha kugqitywa ngokubanzi ngokuprintwa, ukugqitywa komphezulu (ubhedu, isilivere, ifilimu, i-UV yendawo, i-convex, njl. Njl.), Ukusika ibhokisi kunye nokuhlola ibhokisi kunye nokupakisha.
Inkqubo yemveliso yebhokisi yesipho igqityiwe kukushicilela, umphezulu wokugqiba izinto ufe ukusika ibhodi engwevu, ufe ukusika ibhodi engwevu, ibhodi engwevu egudileyo eyenza kunye nokuncamathisela izinto ngaphambi kwendibano, ukuhlolwa kunye nokupakisha.
Ukusuka kwinkqubo yeemveliso ezimbini, inkqubo yokuvelisa ibhokisi yesipho inzima kwaye inzima, kwaye umgangatho wetekhnoloji uphezulu kakhulu kunebhokisi lephepha elisongiweyo. Uninzi lweebhokisi zezipho ezikumgangatho ophezulu eziqhelekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla zenziwe ngephepha, kwaye umphezulu wephepha yeyona nto ifanelekileyo ekusetyenzisweni kwonyango lobuchwephesha.
3. Iziphene eziqhelekileyo kunye neendawo zokulawula umgangatho
Umda ovulekileyo: emva kokuncamathisela iphepha kwimiphetho emine yebhokisi yomzimba, ukubambelela akunamandla, kwaye kukho into emisiweyo phakathi kwephepha kunye nebhodi engwevu.
Umbimbi: Emva kokuncamathisela umphezulu wephepha ukwenza isitenxo, ubude obahlukeneyo besibaya esifileyo.
I-Angle eyaphukileyo: iphepha lonakele kwaye livezwe kwiimbombo zone zebhokisi emva kokuncanyathiselwa.
Ukuvezwa kothuli (ukubhencwa ezantsi): ngenxa yokuchaneka kwemveliso yeepleyiti ayichanekanga ngokwaneleyo, okanye iseti yokusebenza kokuncamathisela, okukhokelela ekubeni iphepha lisongwe emva kokususwa kwesitaki, kukhokelela ekubeni ipleyiti yothuthu ivezwe.
Iqamza: Ukuphakama okungaqhelekanga, kunye nobungakanani bebhokisi ebusweni bebhokisi.
Amabala e-glue: Imizila yeglu eseleyo kwimigangatho.
Ukuhanjiswa: kukho intsalela yegranular yezinto kumaleko ongezantsi wezinto zokupakisha, umphezulu wenkxaso yendawo, owenzakalisa isicaba sebhokisi yomhlaba.
I-Angle ephezulu nephantsi: ibhodi engwevu enesiqingatha ngokusebenzisa ukusika okufayo okanye ukugungqa, amacala amane esibayeni enza amacala amabini akufutshane okuphakama awahambelani.
Amanzi athambile: emva kokuncamathisela umzimba webhokisi, ukwenzela ukuba imiphetho yawo kunye neekona zihambelane, kuyimfuneko ukusebenzisa iscraper ukukrwela imiphetho yomzimba webhokisi, kuba amandla ayomgangatho, wonke umda uya kuvela ubude, i-concave kunye ne-convex strip okanye i-bubble encinci, njengamanzi amnyama.
4. Ubume obuqhelekileyo bebhokisi ephezulu
Iibhokisi zezipho zeentlobo zazo zonke iintlobo, ukusuka kumanqanaba esakhiwo ukuya phezulu nasezantsi ngokudityaniswa kwesiciko kunye nefom yesiseko, ebethelelwe ngokudibeneyo kwibhokisi yekhatriji, kukho malunga nokuvulwa nokuvalwa kohlobo lomnyango, incwadi edityanisiweyo yohlobo lwendibaniselwano, ezi Iindidi zokubeka ulwakhiwo olusisiseko lweebhokisi zezipho, phantsi kwesakhelo esisiseko, abaqulunqi baphuhlise uhlobo lwebhokisi yeprotean, ekupakishweni kweemveliso ezibekwe kwigama elipholileyo, Oku kulandelayo kuya kuqala kuhlobo lwebhokisi eqhelekileyo kunye negama ukwenza intetho :
1) isiciko kunye nebhokisi yesembozo esisiseko
Isiciko nesembozo esisisiseko sibhekisa kuhlobo lwebhokisi. Isigqubuthelo sebhokisi "sisivalo" kwaye ezantsi "sisiseko", ke ibizwa ngokuba sisigqubuthelo sesiciko kunye nesiseko.Isembozo sesembozo kunye nesiseko, esikwabizwa ngokuba sisiciko kunye nebhokisi yesiseko, sisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zezipho ezinoqweqwe ibhokisi, ibhokisi yezihlangu, ibhokisi yangaphantsi, ibhokisi yehempe, ibhokisi yefowuni ephathwayo kunye nezinye iintlobo zebhokisi yokupakisha
2) Ibhokisi yencwadi
Iqokobhe lenziwe ngeqokobhe kunye nebhokisi engaphakathi, iringi yegobolondo yebhokisi yangaphakathi kangangeveki, emazantsi ebhokisi engaphakathi kunye nodonga lwangasemva, omabini amacala egobolondo ancanyathiselwe ndawonye, ​​kunye nenxalenye engaphezulu yeqweqwe unglued ingavulwa, kwaye ubume bangaphandle bufana nencwadi enoqweqwe oluqinileyo.
3) Ibhokisi yeedrowa
Ukuba isiciko kunye nebhokisi yokugquma yesiseko inokunika umntu uhlobo lweemvakalelo ezinomdla, ke ibhokisi yedrowa inokwenza uhlobo lwemfihlakalo emntwini. Iyamangalisa, kuba ukujonga ukumila kwayo kwenza abantu babe nohlobo lokuqhubela phambili abanakulinda ukuba bakhuphe ukujonga ngaphakathi "kubutyebi".
Esi sifuba sedrawer sazalelwa ukuba sibe yibhokisi yobuncwane. Ikhava yebhokisi yohlobo lweDrawer yenziwe ngetyhubhu, kwaye umzimba webhokisi uyidiski emile, ibhokisi yebhokisi yebhokisi yomzimba ngamalungu amabini azimeleyo. Umzekelo oyila njalo, vula uvule ube luhlobo lokonwaba. Ukucotha kancinci okomzuzwana kuba yinto yolonwabo kwangoko.
4) ibhokisi ezinamacala
Ubume bebhokisi bunamacala amathandathu, kwaye uninzi lwazo lugqunywe ngesiciko kunye nesiseko.
5) ibhokisi yefestile
Vula iwindow oyifunayo kwicala elinye okanye nangaphezulu kwebhokisi, kwaye uncamathisele i-PET ebonakalayo kunye nezinye izinto kwicala elingaphakathi ukubonisa ngokupheleleyo ulwazi lwemixholo.
6) Iibhokisi ezisongelayo
Ibhodi engwevu njengamathambo, kunye nephepha leplassplate okanye elinye iphepha lokuncamathisela, ukugoba ibhodi engwevu ukushiya isithuba somgama othile, ukusetyenziswa kwayo yonke imilo-ntathu, kungasongwa ngokukhululekileyo.
7) Ibhokisi yenqwelomoya
Ibhokisi yeenqwelomoya, ngenxa yenkangeleko yayo efana nenqwelomoya ebizwa ngegama, yeyesebe lebhokisi, ibonisa ukupakishwa, ukuhanjiswa okukhethiweyo, okwenziwe ngamaphepha
Ezi zezona bhokisi zixhaphakileyo zesipho kwimarike, kwaye zininzi iibhokisi ezikhethekileyo ezimile ngokukodwa ezingakhankanyi enye.
Njengebhokisi yesipho esiqhelekileyo semveliso yokupakisha kwimarike, iibhokisi zezipho eziphezulu ziya kukhethwa ngabanini beempawu. Ubume, izixhobo kunye netekhnoloji yeebhokisi zezipho ziya zisiba sisityebi. Uwenza njani umsebenzi olungileyo kwibhokisi yezipho ukupakisha kunye nokuprinta yingxaki amashishini okushicilela aya kujongana nayo ngokuqinisekileyo.
Ixesha lokuposa: Jul-20-2021